Tag: doka ara-tsosialy | Martech Zone
Tag: dokam-barotra sosialy voaloa
Inona ny atao hoe Marketing Pay-Per-Click? Anisan'izany ny statistika manan-danja!
Alatsinainy, 3 Jona, 2019 Alatsinainy, 3 Jona, 2019 Douglas Karr
Ny fanontaniana iray mbola anontaniako avy amin'ny tompona orinasa matotra dia ny tokony hataon'izy ireo marketing marketing pay-per-click (PPC) na tsia. Tsy fanontaniana eny na tsia tsotra izany. PPC dia manolotra fotoana mahavariana hanosehana dokam-barotra eo imason'ny mpihaino amin'ny fikarohana, sosialy ary tranokala izay mety tsy tratranao matetika amin'ny alàlan'ny fomba voajanahary. Inona ny atao hoe Marketing Pay Per Click? PPC dia fomba fanaovana dokambarotra an-tserasera izay andoavan'ny mpanao doka a
Zoma, Oktobra 9, 2015 Alatsinainy Oktobra 12, 2015 Douglas Karr
Nisy resaka an-taonina maro momba ny fahafatesan'ny dokam-barotra. Twitter dia tsy nahomby loatra tamin'ny fonosana fanaovana dokambarotra. Mahomby ny Facebook, saingy mankaleo ny dokambarotra miparitaka hatraiza hatraiza ny mpanjifa. Ary ny fikarohana karama dia mitohy mampandoa fidiram-bola tsy mampino… fa ny fikarohana kosa mihena satria ny fomba hafa hikatsahana sy hitadiavana vaovao amin'ny Internet dia mitombo laza. Mazava ho azy, raha manontany ny mpanjifa ianao (ary TechnologyAdvice sy Unbounce no nanao) dia hieritreritra ianao fa tsy misy dikany: